UKUHLAZIYA: I-United Airlines i-Untold Ibali le-COVID-19 Nightmare iyaqhubeka
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » UKUHLAZIYA: I-United Airlines i-Untold Ibali le-COVID-19 Nightmare iyaqhubeka
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Abagibeli abangama-50 ababhabhe kwi-United Airlines ngenqwelomoya engu-3742 ukusuka eChicago ukuya eMilwaukee, eqhutywa yiAir Wisconsin, ngoMvulo bayakrokra ukuba banesivumelwano neCOVID-19. Le nqwelomoya bekungafanelanga ukuba ivunyelwe ukuba ihambe, kwaye oku kungqinwe ngumgcini wenqwelomoya kunye nomphathi njengongakhuselekanga.
I-FAA ifikelele kwi eTurboNews kwaye wamkela umba.
I-FAA ixelele eTurboNews Zombini iinkqubo zoMoya oMkileyo zaqhekeka kwaye yayiqhelekile inqwelomoya ukubhabha kunye nabakhweli, kodwa ingekho mthethweni
Kuxelwe i-FA eTurboNews ukuba kungenzeka ukuba kufunyenwe loopole ngenxa yeli bali. Yintoni elungile kumaxesha angenabungozi, isenokungakhuseleki ngexesha lobhubhane. Olunye uhlaziyo luza kubakho
Inqwelo moya yabakhweli eUnited Airlines apho ukucocwa komoya kucinyiwe ngenxa yokungasebenzi kakuhle kwavunyelwa ukubhabha.
Lo mbandela wawusaziwa ngaphambi kokuba ususwe kwaye ungakhathalelwa.
I-United Airlines UA 3742 isuka eChicago isiya eMilwaukee ngo-Okthobha u-4.
UScott Kirby, I-CEO ye-United Airlines, yathi ngoJulayi 2020Siyazi ukuba okusingqongileyo kwinqwelomoya kukhuselekile, kuba ukuhamba komoya kuyilelwe ukunciphisa ukusasazeka kwesifo, ngenxa yoko ngaphambili sandisa ukuhamba komoya ngaphezulu kwenkqubo yethu yokuhluza i-HEPA, kubhetele kubasebenzi bethu nakubathengi bethu. Umgangatho womoya, odityaniswe nomgaqo osisigxina wemaski kunye neendawo ezibulala iintsholongwane rhoqo, zizinto zokwakha ukuthintela ukusasazeka kwe-COVID-19 kwinqwelomoya. ”
Kuyaphazamisa ukubona ukuba inqwelo moya inye ayikuhoyanga oko kwanconywa yiCEO yayo njengekuphela kwendlela yokuqhuba iinqwelomoya ngokukhuselekileyo ngexesha lobhubhane.
Ukugcinwa kwe-United Airlines eChicago kukhuthaze ukapteni ohamba ngenqwelomoya i-UA 3742 ukuba isuke isazi ukuba inkqubo yokuhluza umoya ayinakusetyenziswa kule ndiza mfutshane iya eMilwaukee. Isizathu: Ulondolozo lweWisconsin luseMilwaukee - ungaze ubakhathalele abakhweli.
I-UA 3742 yayiqhutywa yiMiloukee esekwe ngenqwelomoya yabahambi ngenqwelomoya i-Air Wisconsin, isebenzisa i-CL 65, ebonakala ngathi yinqwelomoya yeCRJ 200. I-Canadair CL 65 yinqwelomoya enezihlalo ezingama-50 eyakhiwa yiQuebec, eBombardier esekwe eCanada, phakathi kuka-1992 ukuya ku-2006.
Nini eTurboNews ebizwa ngokuba yinkxaso yezobuchwephesha yaseBombardier, olu papasho lwaxelelwa ukuba inqwelo moya indala kakhulu ukuba ingenakho inkxaso yangoku kwi-Intanethi.
Enkosi Ku Iifilitha zomoya ophezulu osebenza esibhedlele (HEPA), uninzi lwamasuntswana (kubandakanywa iintsholongwane kunye namachiza okuphefumla ngentsholongwane) ayasuswa kumoya womoya wenqwelomoya wenqwelomoya rhoqo njengoko uhamba ngebhayisikile kwaye utshintshwa ngumoya omtsha. Oku kwenzeka kuzo zonke iinqwelomoya ezinkulu kunezona jets zemimandla ezingama-50 nangona ezinye iinqwelomoya zityala imali kwitekhnoloji yokuhluza i-HEPA kwezi moya ngoku, nazo.
Okucacileyo, ukuba akukho moya ujikelezayo konke konke okwenzeka kwinqwelo-moya yabakhweli, oku kuyakubeka abakhweli kunye nabasebenzi ebhodini emngciphekweni wokubamba iintsholongwane, ezinje nge-COVID-19. eTurboNews wafikelela kummeli wezohambo ngenqwelomoya u-Lee eNew York, kunye no-VJ P, owayesakuba ngu-VP we-Etihad Airways ukuqinisekisa oku.
Kuyacetyiswa ukuba uhlale i-6 yeenyawo kude nomgibeli olandelayo, enyanisweni ayinakwenzeka kuyo nayiphi na inqwelomoya, ngokukodwa kwijeti yabakhweli ebhukishwe ngokupheleleyo, njenge-UA 3742 nge-4 ka-Okthobha.
Ngaphandle kokuphambuka ekuhlaleni, ukuhluza umoya ngokufanelekileyo inokuba kuphela kwento enokuma phakathi komgibeli kunye nentsholongwane.
Kwi-UA 3742 esebenza ukusuka eChicago O'Hare ukuya eMilwaukee ngo-Okthobha u-4, abasebenzi base-United Airlines babhengeza kwindawo yokubhoda, ukuze kufudumale kancinane kwinqwelomoya kuba imeko yomoya yayingalungelelanisi. Akuzange kuchazwe ukuba yonke inkqubo yokungenisa umoya iphumile, kwaye iyakubeka abakhweli kunye nabasebenzi emngciphekweni wokubamba i-coronavirus okanye nasiphi na isifo esisemoyeni.
I-UA 3742 irhafisile kwindlela yeChicago, kwaye iqondo lobushushu ngaphakathi belisele lishushu, kangangokuba uninzi lwabakhweli lwaqala ukubila, kwaye abanye baqala ukukhwehlela.
Inkqubo yokujikeleza komoya ayikaze ifike, kodwa okuhlekisayo kukuba, umphathi wenqwelomoya wachaza ngebhongo inkqubo entsha yokucoca iUnited Airlines.
Xa ubuzwa ngasese, kwa lo mntu ubesiza ngenqwelomoya uxelele eTurboNews ukuba woyika ukuba kuloo moya kwaye wayethenjisiwe ngenqwelomoya wangaphambili inkqubo yokungenisa umoya iyakusetyenzwa eChicago. Uye wathi ngaphandle kwamathandabuzo wavuma ukuya eMilwaukee, ekwayikhaya lakhe, esongeza ukuba akazukuphinda abuyele emsebenzini ukubhabha kule nqwelo moya kwakhona.
eTurboNews Ukuphindaphinda ukufikelela kwi-United Airlines kunye ne-Air Wisconsin ukufumana ingcaciso malunga nokuba ezo zihluzo zisetyenzisiwe kule ndiza. Akukhange kubekho mpendulo nakweyiphi na.
Ngokucacileyo eChicago, i-hub ye-UA, ulondolozo lwe-United Airlines alufuni ukujongana nomcimbi kwaye lucebisa ukuba inqwelomoya iye eMilwaukee isebenze, ukuze iinqwelomoya zilungiswe eMilwaukee, kwisiseko se-Air Wisconsin.
eTurboNews Uthethe nomqhubi wenqwelomoya emva kokufika emhlabeni wabuza ukuba kukhuselekile na ukuqhuba inqwelomoya ebhukishe ngokupheleleyo nenkqubo yokungenisa umoya kakuhle ngexesha lobhubhane. Umqhubi wenqwelo moya wavuma eTurboNews bekungekho, kwaye waxolisa.
Omnye umgibeli wathi wayengukapteni othathe umhlala-phantsi kwaye wayecaphukisa ukuba umphathi weAir Wisconsin asebenze kule nqwelo moya.
eTurboNews Ufikelele kwi-United Airlines amatyeli aliqela ukufumanisa ukuba ingaba abakhweli kule nqwelo moya banokulandelwa na, kodwa kwakhona akukho mpendulo.
eTurboNews Ukwafikelela kwiUnited Airlines ecela ingcaciso. Ubuhlobo beendaba buxelelwe eTurboNews, Akukho siganeko singene kule ndiza.
Inkonzo yabathengi ye-UA ithe, le yayingeyonto inkulu kuba yayiyifutshane nje ngenqwelomoya, kodwa baya kutyala i-5,000 yeemayile ezihamba rhoqo ngenxa "yokuphazamiseka."
Indoda egama lingu "Chris" yathetha nayo eTurboNews umpapashi uJuergen Steinmetz. Uye wathi, wayeyi-VP yoKhuseleko loShishino lwe-Air Wisconsin. Usivumile eso sehlo kwaye wacela uxolo. Uthembise ukubuyela kwi-eTN ngeenkcukacha ezithe kratya. Khange yenzeke, kodwa endaweni yoko i-Air Wisconsin ithumele i-imeyile ngaphandle kwegama lokudibana okanye utyikityo.
Ngokumalunga namava akho akutshanje endiza 3742 ngenkonzo esuka eChicago ukuya eMilwaukee. Ukhuseleko yeyona nto iphambili kuthi e-Air Wisconsin.
Inqwelomoya yahlangabezana neenqobo zokulungela ukungena kwi-FAA kwaye abasebenzi bethu, ngokubonisana neengcali zethu zolondolozo, baqinisekisa ukuba inqwelomoya ikhuselekile ukuba ingasebenza. Siyaxolisa ngayo nayiphi na inkxamleko eniye nayifumana kwinqwelomoya kwaye siyabulela ngokusazisa.
UJuergen Steinmetz uthi:
Oktobha 10, 2021 kwi-03: 27
Ukucacisa nje ingxelo yakho.
Inkonzo yabathengi ye-United Airlines 1K indixelele kumnxeba wesibini olandelayo ukuba bandibuyisele iikhilomitha ezingama-5K. Ndiphendule andikho emva kwembuyekezo kodwa inkcazo kwaye ndifuna ukuyibona i-UA ilandelela abakhweli ebhodini.
Inenekazi elivela kumthengi o-1 K kule fowuni irekhodweyo lithe le yindiza nje emfutshane kwaye akusayi kubakho kugunyazwa kungagunyaziswanga kukungakhathali.
Ndibuze abantu bezonxibelelwano kwimithombo yeendaba ukuba baphendule. Emva kwe-5 yokulandelela ii-imeyile ekuphenduleni okuphenduliweyo kukupapashwa okukhoyo kwaye okuvela kumoya waseWisconsin.
Ndithethile noChris VP wokhuseleko ukusuka
U-Air Wisconsin owayewazi lo mbandela kwaye wathembisa ukuba uza kubuyela kum - akazange enze njalo.
Oktobha 10, 2021 kwi-01: 49
Kuninzi apha ukubiza i-BS. A. Hayi inqwelo moya yabasebenzi okanye abasebenzi, yayiyinqwelomoya yabahambi. B. Ukuba isondlo silumkise uKapteni kutheni kungekho ngxelo ibhaliweyo ngenkqubo eyaphukileyo? C. Ndiyathandabuza kakhulu ukuba nabani na kulawulo lwe-United angaze athethe noonondaba esithi le “ayiyonto inkulu” kuba ibikukuhamba nje okufutshane. Kukho amacala amabini kuwo onke amabali kwaye eli ligcwele imingxunya.